Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare oo soo bandhigtay deeq waxbarasho oo ka timid dalka Ciraaq | Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare
Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare waxay ogeysiinaysaa dhamaan ardada Soomaaliyeed ee waxbarashada Jecel in ay heshay deeq waxbarasho oo ka timid dalka aan walaalaha nahay ee Ciraaq taasi oo gaareysa 352 kursi.
Deeqdan Ciraaq naga soo gaartay ayaa isugu jirta Bachelor,Master iyo PHD waxayna wasaaraddu ogeysiinaysaa ardada waxbarashada jecel ee doonaya in ay ka faaideystaan in ay iska soo diiwaan geliyaan xarunta wasaaradda ee ku taalla agagaarka Zoope ayagoo soo buuxinaya shuruudaha hoos ku xusan.
1- Shahaado Asal iyo mid Copy ah
3-Shahaado Caafimaad oo kasoo baxdey wasaaradda caafimaadka soona martay wasaaradda arrimaha dibedda.
4- Sawiro Teesaro ah
5-Shahaadada dhalashada oo ah tan Dawladda Hoose ee hadda la sharciyeeyey.
Isdiiwaangelintu waxa ay xarunta wasaaradda ka bilaaban doontaa maalinta berri ah oo taariikhdu tahay 24/9/2014 waxayna ku ektahay illaa 8/10/2014.
Wasaaradda waxa ay qaadi doontaa imtixaan ardada is diiwaan gelisa lagu kala saarayo waxaana imtixaanka laga qaadayaa oo kaliya ardada u tartamaysa Bachelor-ka halka Masterka iyo PHD qaab cusub loo maareynayo.